Warbixin:Dagaalka hoose ee dhexmaraya CIA-da iyo Baraha Bulshada oo sii laba lixaadsanaya,iyo Yahoo oo hanjbatey.
Monday September 15, 2014 - 11:32:48 in Wararka by Super Admin
Sirdoonka dalka Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo CIA ayaa xiliyadii danbe waxaa soo wajahay Shaqaale yari baahsan,iyo Cabsi ku aadan Weeraro lamid ah kuwii 11 Septembar oo ka dhaca dalkiisa.
USA waxay cadaadis saareysaa shabakadaha bulshadu ku wada xariirto
CIA-da waxay haatan wajaheysaa qal qal xoogan oo kaga imanaaya Cabsi ay ka qabto Weeraro ka dhaca dalkeeda,waxayna sii laba jibaartey dadaalkeeda ku aadan sidii ay u ogaan lahayd Macluumaadka la isku dhaafsado Baraha Internetka.
Waxay Cadaadis saarteey Baraha Bulshada,iyadoona Shirkadda ugu weyn ee Internetka sida Microsoft iyo Facebook ay saxiixeen heshiis dhigaya iney soo gudbiyaan Macluumaadka la isku dhaafsanayo Shabakadahaas.
Cabsida ugu badan ayaa ah In CIA-du ka shakisan tahay qaar katirsan Cumaladeeda,taas oo keentey in si gaar ah ay u ugaarsadaan Accounada ay leeyihiin Jawaasiistaas.
Qaar katirsan Baraha lagu wada xiriiro ayaa ka biya diidan dalabka Sirdoonka Mareykanka,waxaana muuqaneysa in Cadaadis xoogan ay saareyso Xukuumadda Mareykanka Shirkadaha diida Codsiga Sirdoonka dalkaas.
Markii ugu horeysay Shirkadda Yahoo ayaa wacad ku martey iney baahin doonto Ducuments sir ah,taas oo ay ku cadeyneyso dagaalka hoose ee dhexamaraya Shirkadda iyo Sirdonka Mareykanka ee CIA.
Maamulka Shirkadda ayaa sheegay in dagaal soo bilowday sanadkii 2008 illaa iyo hadda uu dhexmarayo Shirkadda iyo Sirdoonka Mareykanka,waxaana Shirkadu sheegtey iney baahin doonto 1500 Ducements oo ah Fariimo ay is dhaafsadeen Mareykanka iyo Shirkadda oo ku aadan in Shirkadu Sirdoonka ku wareejiso Xogta ay is dhaafsadaan Macaamiisha Shirkadda.
Yahoo ayaa arinkaas ka biya diidsan illaa hadda,waxaana Shirkada ganaax ahaan looga qaadaa maalin kasta lacag gaareysa 250 Milyan oo Doolarka Mareykanka,waxaana sii dheer in Isbuuc kasta lagu sii kordhinayo Ganaaxa Shirkadda.
Yahoo ayaa ku hajabtey iney baahin doonto Decuments kale oo sir,kuwaas oo ku aadan Fariimo ay is dhaafsadeen CIA-da iyo Shirkadda.
Arinkan ayaa muujinaya sida Dowladda Mareykanka ay cadaadiska xoogan ugu heyso Baraha Bulshada,iyo sida uu u daciifey Sirdoonkeeda oo kusoo harey kaliya inuu u caga jugleeyo Baraha Bulshadu isticmaasho,waxaana dadka qaar ay qabaan fakar ah in arinkan YAHOO ay ku dooneyso iney ku hesho Sumcad xoogan,taas oo usoo jiidi karta Macaamiil cusub,maadaama Xogta Macaamiisheedu ilaaliso.